राति अबेरसम्म निन्द्रा लागेन ? यसो गर्नुहोस् – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured राति अबेरसम्म निन्द्रा लागेन ? यसो गर्नुहोस्
अहिलेको समयमा राति निन्द्रा नपर्ने समस्या आम भइसक्यो । अधिकाशं मानिस राति पुर्ण र राम्ररी निदाउन नसक्दा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, खाना जतिकै निन्द्रा पनि शरिरको आवश्यकता हो । यसकालागि मानिस २४ घण्टाको अवधीमा न्युनतम ७र८ घण्टा निदाउन आवश्यक छ । अन्यथा निद्रा प्रभावित भएमा दैनिक कामकारबाहीदेखि स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दछ ।